Obboleettii haadha mana kootii ulfeessee - Xalayaa Jaalalaa
Waanan godhu wallaale! Mala naa malaa
Ganamoo Liibanin jedhama. Kan ani jiraadhu biyya Amerikaa magaalaa Chicago dha. Gidduu kana rakkoo tokkoti na mudatee jira. Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akka naaf kennitan fedha.
Mucaa godhachuu dhabuun keenya jaalala anaaf haadha manaa koo gidduu jiru hin hir’isne. Jaalalli nuyi waliif qabnu akkuma bara Koolleejjii waliin barannuu sanadha. Lachuu keenya iyyu baayy’ee wal amanna.
Barreessaan: Latii Hundee
Duraan erga digoggoramee booda lubbuu balleessuun Safuu dha.
Garramuu Katamaa Yaadaa
Ani akka yaada kiyyaatti Haadha Mana koo waliin waggaa 12 ol kan wajjin jiraadhe waliin hawwii ilmoo argachuu osoon qabuu ishee irraa hin argannee Garuu akka tasaa ta’ee Gochaa hin taaneen Dhugaatii guyyaa biraa hin dhugne dhugee waanan argameef dogongoreeraa yaa ta’utii hawwii ilmoo koo argadheeraa karaa dogongoraa ta’us kanaaf dhala uumame kana balleessuun lama addabbii ta’a kaaraa waaqayyoon kanaafuu akkuma ta’etti ta’ee Obbooleettii haadha mana koo kana gara biyyaatti deebisee dogongoraa jiruuf immoo Guyyaa biraa haadha mana koo kana teessisee ija jaalalaan amansiisee itti himee dogongora jiru yoo dhiifama naaf goote dhiifama gaafadha isheen yoo didde dursumaa kan rakkoo dhala argachuu qabu ani rakkina isheen qabduuf jedhee ilmoo osoon hin aragatiin jalala ilmootiin jiraachaa turuun fayidaa hin qabne waan ta’uuf ani haadha manaa koo iiti himeen itti dhiisaa yoo iesheen didee loltee narraa adda baate isheedhuma ilmoo irraa argadhen jaaladhee ofitti deebisee wajjin jiraadha.
Egaa ilmi namaa inuma dogoggora. Dogoggorasaa irraa immoo baratee deebi’uunis amalasaati. Erga dogoggora kana raawwattee, gaabbiifi murtiin biraa homaa bu’aa hinbuusu. Kan ati gochuu qabdu, inni duraa obboleettii haadha manaakeefi haadha manaakee bakka tokkotti waamii isaan duratti kufii dhiifama gaafadhu! Kun dogoggora itti hin yaadamne waanta’eef sirriitti isaan amansiisii isaaniin waadaa waliif galchisiisi! Inni lammaffaa obboleettii haadha manaakee achuma ofuma bira kaa’i! Inni sadaffaafi inni xumuraa, ulfa uumame yeroo malee baasuufi lubbuu ajjeesuun cubbuudha. Waaqnis hinjaallatu… Galatoomaa!
Lubbu Hin Balleessin
Anilee akka yadaa kiyatti ulafa yeroo malee basuun midhaa waan qabuuf basunis dongogora lammafa
Ati ilmoo hawwita garuu ni dhabde akkuma carrammo rakkoon rakkoo caalu sitti dhufe kana gorsa ani sif laadhu lamaan isaani dhiifama gaafatta yoo haati manaakee diddemmoo isheema ulfeessitee wajjin jiraatta. kanuma
waan badaa goote waaqayyo sihaa baasu